Nylon pushoni ine yakanakisa kugadzikana uye yakanakisa michina zvivakwa |
1.Inogona kuchengetedza pamusoro pesimbi yesimbi.
2 Yakareruka uye yakapusa kutsiva. Yakadzora basa kusimbaTave vemberi technoiogog uye vane ruzivo rwekugadzira kuti vatsigire nyanzvi yakagadziriswa mhando dzese dzekutakura kusangana zvakasiyana zvinodiwa.
Upfumi Pamusoro pehunhu hweyakajairika zvinhu zvenylon zvinhu, MC nylon ine yakakwira mamorekuru uremu uye yakakwirira crystallinity. Naizvozvo, simba rezvinhu zvepanyama uye zvemuchina zvimiro zvakapetwa ka1.5 zvakapfuura zveyakajairwa nylon, uye simba remuchina rakakwira. Inogona kuiswa pamishini yakakura. Iyo inopesana nekupfeka uye yekuzvizora-mafuta. Hupenyu hweMC nylon pulley yakawedzera zvakapetwa ka4-5 kupfuura iya yesimbi, simbi uye pulleys. Pasina kukuvadza iyo yekukwirisa zvinhu, kugadzira crane pulleys, iyo yekupfeka-inodzivirira hupenyu hwetambo tambo inogona kuwedzerwa ne gumi nguva; tembiricha inochinjika inogona kushandiswa mukati me -40 ℃ -100 ℃ 5. Inogona kutora vibration, kuburitsa ruzha, kumhanya mushe, uye ine zvimiro zvekudzimisa. , Yakachengeteka kushandisa
MC nylon parizvino ndiyo yakanyanya kunaka zvinhu kutsiva isina-ferrous goridhe. Inoshandiswa zvakanyanya muinjiniya michina, simba remagetsi, peturu, mugodhi, marasha, simbi, kugadzira mapepa, kuvaka, madoko, ropeways uye mamwe maindasitiri kugadzira pulleys, slider, honye magiya, magiya, uye mashizha. Zvikamu zvakasiyana-siyana zvakaita semavhiri bushings, anotakura makwenzi, madhiramu, zvigaro zvevhavha, zvindori zvekutsigira, kukuya ma disc, kubhadhara-pulleys, simbi yesimbi hwaro hwakawanda-epamusoro matemplate, nezvimwe.
Pashure: Yakareba-hupenyu mc nylon inotsvedza ndeyemhando yepamusoro uye yakasimba
Zvadaro: yemhando yepamusoro Nylon inotsvedza yeKuvaka michini mhando